ကျန်းမာရေးအတွက် ကြက်မောက်သီး ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကြက်မောက်သီးပင်မှ လူသားတို့ အတွက် အာဟာရပြုပေးနိုင်ပုံကို Institute of Medicine က ယခုလို အကြံပြုထားပါသည်။ ကြက်မောက်သီးသာမက၊ အရွက်၊ အသီးခွံ၊ အစေ့၊ ပင်စည် နှင့် အမြစ် တို့ လဲဆေးဘက်ဝင်ကြပါသည်။ ပင်စည်ထဲတွင် saponin, tannin, iron, pectin နှင့် flavonoids တို့ ပါရှိကြပြီး၊ အစေ့ထဲတွင် polifenol နှင့် fat တို့ ပါရှိပါသည်။
၁၀၀ ဂရမ်ရှိသော ကြက်မောက်သီး တစ်ခွက်စာ ပမာဏတွင်၊ လူသားတို့ ကျန်းမာရေးအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေသော ပရိုတင်း ၁.၀ ဂရမ်၊ ကဆီဓာတ် ၃၁.၃ ဂရမ်၊ အမျှင်ဓာတ် ၁.၄ ဂရမ်၊ သီအာမင် ၀.၀၁ ဂရမ်။ ဗိုက်တာမင်စီ ၇.၄ မီလီဂရမ်၊ ဆိုဒီယမ် ၁၆.၅ ဂရမ်၊ ပိုတက်စီယမ် ၆၃.၀ ဂရမ်၊ ကယ်လ်စီယမ် ၃၃.၀ မီလီဂရမ်၊ ဗိုက်တာမင်အေ ၄.၅ IU နှင့် သံဓာတ် ၀.၅ မီလီ ဂရမ် တို့ ပါရှိပါသည်။
ပြည့်ဝဆီနှင့် ကိုလက်စထရောတို့ လုံးဝမပါရှိကြပါ။ ကြက်မောက်သီးတွင် သကြားဓာတ်၊ အထူးသဖြင့် ဖရက်တို့စ် နှင့် ဆူးခရို့စ်တို့ များစွာပါဝင်ပြီး၊ ကယ်လိုရီပါဝင်မှု နည်းပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ယခုလို အာဟာရတန်ဘိုးများစွာ ပါဝင်သည့် ကြက်မောက်သီးကို စားပေးခြင်းဖြင့် အောက်ပါ ကျန်းမာရေးစွမ်းပကားများကို ရရှိစေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
7. ကြက်မောက်သီးက လူတစ်ဦးလျှင် တစ်နေ့ တာလိုအပ်သော သံဓာတ်ပမာဏ၏ ၁၃.၈% ကျော်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် သံဓာတ်အရင်းအမြစ်တို့ စုဝေးရာ ကြက်မောက်သီးကိုစားသုံးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော အောက်ဆီဂျင် ပမာဏကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ပြီး၊ မူးဝေခြင်း၊ နုံးချည့်ပင်ပန်းခြင်း၊ ဖျော့တော့နွမ်းနယ်ခြင်းစသည့် သံဓာတ်အားနဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ် သော သွေးအားနည်းရောဂါ တို့ ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
8. ကြက်မောက်သီး တစ်ခွက်စာ ပမာဏကို စားသုံးသောအခါ၊ တစ်နေ့တာ လိုအပ်သည့် ဖော့စ်ဖရပ်စ် ၄.၃% ကို ရရှိစေသည့် အတွက်၊ ကျောက်ကပ်ကို ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
11. ကြက်မောက်သီးအစေ့ကို သူ့ ချည်းဘဲ အစိမ်းလိုက်ဝါးစားနိုင်သလို၊ ကြိတ်ချေပြီးအခြားအစားအစာတို့ နဲ့တွဲဘက်စားပေးခြင်း ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အဆီများကို ထိထိရောက်ရောက် ချပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ ပြင် အသားအရည်ကိုကျန်းမာစေပြီး အထူးသဖြင့် မျက်နှာ အသားအရည်ကို နူးညံ့ချောမွေ့ စေပါသည်။ (လူအချို့ ကတော့ ကြက်မောက်သီးအစေ့နှင့် မွေးရာပါ ဓာတ်မတည့်မှုများရှိတတ်သဖြင့် သတိပြု၍ စားသုံးသင့်ပါသည်)
ကြက်မောက်သီးသည် စပျစ်သီးထက်အရည်ရွှမ်းပြီး၊ လိုင်ချီးသီးအရသာနှင့်လဲ ခပ်ဆင်ဆင်တူပါသည်။ ရာသီစာ သီးနှံဖြစ်သောကြောင့် ယခုလို မိုးဦးကာလတွင်သာရရှိနိုင်သည့် ဆေးဘက်ဝင်ကြက်မောက်သီးများကို ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူ မိတ်ဆွေများအားလုံး အချိန်မှီအပြေးကလေး ၀ယ်ယူစားသောက်စေလိုပါကြောင်း........။